Cubbuu Diinaa…Abiy Ahmad maraateera. Yoo Maayikii harka kaa’an wanti haasa’u guyyaa tokko osoo hin bulin qilee bu’a. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsCubbuu Diinaa…Abiy Ahmad maraateera. Yoo Maayikii harka kaa’an wanti haasa’u guyyaa tokko osoo hin bulin qilee bu’a.
Cubbuu Diinaa…Abiy Ahmad maraateera. Yoo Maayikii harka kaa’an wanti haasa’u guyyaa tokko osoo hin bulin qilee bu’a.
Abiy Ahmad maraateera. Yoo Maayikii harka kaa’an wanti haasa’u guyyaa tokko osoo hin bulin qilee bu’a.
Ol’aantummaan seeraa Mana Murtii Kabajuu irraa eegala. Qabsaa’ota keenya cubbuudhaan ji’a torbaa oliif hidhee, Ummata isaanii rasaasaan goolaa, ammas lubbuun isaanii gaaga’ama ol’aanaa keessa jirtu balleessuudhaaf shira ol’aanaa hojjataa jira.
Manni Murtii Hoggantootni keenya akka Hospitaala dhuunfaatti yaalaman ajajus Abbaan Irree Abiy Ahmad ajaja sana didee shiraan akkuma Haacaaluu galaafate lubbuu isaanii galaafataa jira. Osoo ol’aantummaan seeraa isaan odeessan ni hojjata tahee silaa har’a warri murtii abbaa murtii didee waan ofii godhe godhu kun Mana Murtiitti dhiyaatu turan.
Yaadadhaa, Mallas Zeenaawiituu sirna isaa keessatti Himatamee Mana Murtiitti dhiyaateera. Sirni Abiy garuu waggaa lama keessatti Abbaa Irrummadhaan Mallas caalee, lubbuu meeqaa meeqa galaafatee, amma immoo Hoggantoota Oromoo guutumaan guututti dhabamsiisuuf qarqararra jira. Immoo as garagalee waa’ee Ol’aantummaa seeraa haasa’a. Hoolotni isaas waan inni isaanii jedhuun ala sammuu ittiin yaadaniifii onnee adeemsa dogongoraa inni irra jirurraa ittiin deebisan hin qaban!
Sabboontonni Oromoo sadarkaa sadarkaafii haala gargaraarra jirtan, Abbootiin Qabeenyaa, Beekkamtoonnifii kkf yoo dandeettan osoo ijji keenya argitu Mootummaan Akka Haacaaluu Ajjeesetti akka Baqqalaa nu jalaa hin ajjeesne waan dandeettan hunda godhaa. Ummata Oromoo guyyaadhaan itti dukkaneessitanii biyyas gaaga’ama siyaasaa biraatif hin saaxilinaa. Guyyaan kuni dabree, Kaateenaan har’a falmattoota haqaatti kaahame warra har’a Ummataafii hoggantoota Ummataatti qoosanitti akka kaahamus hin shakkinaa!
Abba Caalaa says:
Mootummaa Faashistii irraa maal eegduu? Hiriira nagaa, Sochii keelloo, nyaata lagannaa, kkf kan hojjetu, mootummaan ummata biratti gaafatama qabu, kan biyyeef osoo hin taane biyya (saba) isaaf yaadu yoo jiraate dha. Humni amma aango irra jiru, danta biyyoota alagaa bikkaan gahuuf kan carraaqu, gartuu bitamtootaa ti. Kun uumama OPDO ganamaa irraa ka’a. Maqaa Oromootiin ijaaramanii, Oromoo akka sabaatti dhabamsiisuuf kan galgalaa fi ganama ifaaju, mootummaa dha jettanii jala siqxu! Gadadoo waggoota 150 jalaa bahuuf, karaa tokkichi qawwee kaasuu qofa! Kan siif hin galle, taa’ii gururi’i!!